Emre Can oo Taageerayaasha Liverpool kala kulmay afalagaado ku aadan Diintiisa Islaamka, Mane oo Masjid dhisay mise ogtahay in Aabihiis…(Sheeko ku Saabsan xiddigaha Mulimiinta ah ee beri ma tali doonta Final ka Champions League) – Gool FM
Pep Guardiola oo qorsheynaya in shaqsi lama filaan ah uu ka dhigto caawiyihiisa cusub
Mbappé oo si xiiso leh kaga hadlay suurtagalnimada uu ugu guuleysan karo abaal-marinta Ballon d’Or
Emre Can oo Taageerayaasha Liverpool kala kulmay afalagaado ku aadan Diintiisa Islaamka, Mane oo Masjid dhisay mise ogtahay in Aabihiis…(Sheeko ku Saabsan xiddigaha Mulimiinta ah ee beri ma tali doonta Final ka Champions League)
Byare May 25, 2018
(Europe) 25 Maajo 2018. Real Madrid iyo Liverpool ayaa habeen dambe Kive ku ciyaari doona ciyaarta kama dambeysta ee Champions League.
Haddaba Qoramadeena Jimcaha waxaan Usbuucan ku soo qaadan doonnaa xiddigaha Muslimiinta ee lagu wado inay ka soo muuqdaan Final ka Koobka Dhaga waynaha.
Mohamed Salah, Sadio Mane, Emre Can oo u safta Liverpool ayaa heysta Diinteena Islaamka halka dhanka kale uu ka soo jeedo Karim Benzema.
Sadio Mane ee ka mid ah xiddigaha ay ku tashato Reds ayaa mar la waydiiyay sida ay reerkiisa u booqdaan Kaniisada ‘Church’, balse wuxuu durba wariyihii ugu jawaabay inay dhammaan Muslimiin yihiin.
Xiddiga reer Senegal ayaa ku soo koray Bambali ee ah Magaalo yar ee ku taala dalkiisa, Aabihii wuxuu Imaam ka ahaa Masjidka ugu wayn ee magaaladaas, waxaana la wariyay in Mane uu qarashaad xoogan ku bixiyay si dib loogu dhiso Masjidkaas.
Wuxuu ka mid yahay xiddigaha fara ku tiriska ee ka soo jeeda Qaarada Madoow uu hamigoodu yahay in lacagaha waalida ay ka qaataan Yurub ay dib ugu maal galiyaan dalkooda.
Emre Can ee isna Qadka dhexe kaga ciyaara Liverpool isla markaana heysta Diinteena ayaa hadda ka hor bartiisa Twitter ku soo qoray inuu markale Aflagaado ku aadan Diintiisa uu kala kulmay Taageerayaasha Liverpool.
“Muslim ku dhex duceysanaya Anfield Ceeb ayay ku tahay Liverpool.”. Sidaa ayuu soo qoray Taageere Twitterka wax uga sheegay Diinta Islaamka uu aaminsan yahay Can.
Maxamed Saalax oo dabcan ah ah Muslimka loogu hadal heynta badan yahay kubbada cagta adduunka ee xilli ciyaareedkan ayaa ka mid noqon doona Muslimiinta habeen dambe ciyaareysa Final ka Champions League.
Wiilka reer Masar ayaa soomanaa tan iyo sidii ay u curatay bisha Barakeysan ee Ramadaan balse waxaa dhawaan soo ifbaxay warar tibaaxaya inuusan maanta soomaneyn isla markaana uusan berito Soomi doonin sabab la xiriira Final ka Champions League iyo safarka uu galay.
Ruben Pons ee ah macallinka Jir dhiska Liverpool ayaa warkan xaqiijiyay isagoona sheegay inuu yahay qorshe shaqo uu soo jeediyay shaqsiga nafaqeynta u qaabilsan kooxda.
Yeelkeede, waxaa sii horeysay Fatwo ay soo saartay Xarunta Islaamiga ee Magaalada Madrid taa oo lagu sheegay in ciyaartoyda Muslimiinta ee ka qeyb galeysa Champions League ay afuri karaan iyagoon dambaabin maadaama ay Safar yihiin.
“Haddii safarkoodu uu dhaafayo 83 Km waa Musaafiriin, sidaa darteed waa ay u banaan tahay inay afuraan, waana inay soo gudaan maalmaha ka tagay inta aan la gaarin Ramadanka kale” ayuu yiri Mushtawi ee ah Madaxa Xarunta Islaamiga Madrid.
Ugu dambeyn Karim Benzema ayaa ka mid ah xiddigaha Muslimiinta ee lagu wado inuu ka soo muuqdo kulanka kama dambesta Champions League ee Kive ka dhici doona habeen dambe.
Wiilka reer France ayaa kol sii horeysay soo dhigay Boggiisa Instagram isagoo afuraya isla markaana xiran qamiis, wuxuuna muslimiinta kale u rajeeyay Afar caafimaad leh.
Manchester United oo markale wada hadalo la fureysa kooxda Lazio si ay u hesho saxiixa Milinković-Savić
Arag sida uu TINTA ka dhigtay Leroy Sane